Ecommerce Website Development – InfoTech Myanmar
Infotech Myanmar Web Agency is providing Ecommerce Website (online shopping) Development Service.
Not only individual merchant, Retail Store but also huge shopping mall, manufacturing are looking for to sell their products directly to customer, and distributor, whereas some Online Business Provider are looking for the Multi-Vendor E-Commerce platform to support individual merchant, small outlet in facilitation of trading in products and services over the internet.
Infotech Myanmar Web Agency develops dedicated online shopping Website/ Web App in need of our customer who want to do trading selling good and product through online internet.
InfoTech Myanmar Ecommerce Website Development
Boost Your Sales With Online Shopping Channel
Myanmar Online Shopping is kinda business filling with abundant of potential and profits.
If you look at their domestic market, Myanmar hasapopulation of 54 million people, and the level of the world's population 26. More than half of our majority of Myanmar people live in rural. It has such great impact for having even those rural people used online shopping days by days.
Looking at Overseas markets, Myanmar has huge marketplace and opportunity for having existed between the world's largest populous countries and owning ambition of ASEAN Economic Community(AEC) to have "A Single Market".
မကြာခဏ ဝယ်ယူရသော စားသုံးကုန်၊ လူသုံးကုန်များ၊ တခါတရံဝယ်ယူရသော အသုံးအဆောင်များ၊ တိုင်းရင်းသား ရိုးရာကုန်ပစ္စည်း အမျိုးမျိုးကို နေရာအနှံ့မှ ဝယ်ယူမည့်သူများကို ရောင်းချနိုင်ခြင်းသည် အရောင်းပြုလုပ်သူများ(Sellers) အတွက် အလွန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းပါသည်။
Market for Niche Products
ကိုယ်ပိုင် ထုတ်လုပ်ထားသော စားသုံးကုန်၊ လူသုံးကုန်၊ ရိုးရာပစ္စည်း၊ လက်မှုထုတ်ကုန်၊ စက်မှုထုတ်ကုန်၊ စသော ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတို့ကို အွန်လိုင်းမှရောင်းချနိုင်ခြင်းပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတို့အတွက် ၎င်းတို့ကို စိတ်ဝင်စားဝယ်ယူသူ ဈေးကွက်များကို ရရှိပါသည်။
Seize Distanced Customer
အနီးအနားဝန်းကျင်မှ စားသုံးသူများ၏ အမှာစာများကိုသာမက အဝေး၊ ပြည်ပမှ စားသုံးသူများ၏ အမှာစာများကို ရရှိပါသည်။
All Time is Open
အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ၂၄ နာရီ၊ ၇ ရက်၊ ၁နှစ်ပတ်လုံး နေ့ည အချိန်မရွေး စားသုံးသူ၏ အမှာစာကို လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် စတင်တည်ထောင်ချိန်တွင် ကုန်ကျမှု၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်စဉ်တွင် ကုန်ကျမှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ကုန်ကျမှု စသော အချိန်၊ ငွေကုန်ကျမှုများသည် အရောင်းဆိုင်တစ်ခုထက် များစွာသက်သာပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအပေါ်တွင် စားသုံးသူများ၏ ယုံကြည်မှုသာမက၊ ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချပေးသော Ecommerce Site သည်လည်း Brand Image ရပါသည်။
အွန်လိုင်းဈေးကွက်ကြီးတွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို ရောင်းချနိုင်မည်ဖြစ်သည့်အပြင်၊ ကုန်ပစ္စည်းပံ့ပိုးသူကောင်းများ(Best Suppliers)၊ စီးပွားရေးမိတ်ဖက်ကောင်းများ(Suitable Partners)၊ စစ်မှန်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ(Genuine Investors)၏ ဆက်သွယ်မှု၊ ပူးပေါင်းမှုများရရှိနိုင်မည့် အဆုံးမရှိသော အခွင့်အရေးများ (Limitless Opportunities) ရှိနေပါသည်။
Infotech Myanmar is Your